किन लम्बियो ‘नेकपा’ एकता ? ‘भूमरी’ मा शीर्ष नेता !
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकताको बाँकी काम टुंगोमा नपुग्दा आमनेता तथा कार्यकर्ता छटपटिएका छन्। पार्टी एकता घोषणा भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि पूर्णरूपमा एकता हुन नसक्दा नेता तथा कार्यकर्तामा अन्योल छाएको हो। पार्टी एकतापछि महत्त्वपूर्ण तथा जटिल काम टुंगोमा पुगे पनि विभाग, स्थानीय तह, पोलिटब्युरो कमिटी तथा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन जस्ता विषयहरूमा सकस देखिएको छ। पोलिटब्युरो कमिटी गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसहित संगठन विभाग, स्कुल विभाग, विदेश विभाग, प्रचारप्रसार विभाग र आर्थिक विभागमा दिइने जिम्मेवारी सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरू बीचमै विवाद रहेको बुझिएको छ।
नेकपाका नेताहरूले लामो समयसम्म पार्टी एकताको काम अघि बढिरहेको बताए पनि काम हुन नसक्दा नेताहरूमा ‘वितृष्णा’ पैदा हुँदै गएको छ। नेकपाले पार्टी एकता घोषणापश्चात् तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि छाप्नका लागि लान सकेको छैन। सचिवालय बैठकमा देखिएको विवादका कारण प्रतिवेदन छाप्न समस्या आएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। पार्टी एकता घोषणाको एक वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि शीर्ष नेताहरू विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आज र भोलि भन्दै एकताको समय लम्ब्याइ रहेका छन्।
यति लामो समयसम्म पार्टी एकताको विषय ढिलो भएको र यस्तो हुन नहुनेमा नेकपाकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विवाद टुंगिएको र अब एकता प्रक्रिया टुंगिने बताए। नेता भुसालले भने– ‘पार्टी एकता यति ढिलो हुन हुँदैनथ्यो। अब पार्टीका कामहरू अघि बढ्न थालेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन छापिने तयारीमा छ। सायद यो महिनामा पार्टी एकताका कामहरू सक्ने गरी नेताहरू लागेका छन्।’ राजनीतिक प्रतिवेदनका कारण भन्दा पनि अन्य विविध संरचनात्मक विषयका कारण एकता प्रक्रिlsया ढिला भएको उनको निष्कर्ष छ।
सचिवालयकै सदस्यहरू पनि पार्टी एकता हुनपर्ने समयभन्दा केही ढिलो भएको स्वीकार गर्छन्। दुई ठूला पार्टीको एकताभित्र केही सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरू अवश्य रहेको भन्दै त्यसमा लाग्नुपर्दा पार्टी एकता ढिला भएको सचिवालयहरूको तर्क छ। नेताहरूले ढिलोमा वैशाखको पहिलो साता एकताको काम टुंगिने बताए पनि अहिलेसम्म एकताको कामले पूर्णता पाएको छ।
पार्टी एकताको काम ढिला मात्र नभई धेरै ढिला भएको स्वीकार्छन् नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। नेपालटकसँग कुरा गर्दै नेता रावलले पार्टी एकताको काम ढिला हुँदा सिंगो पार्टी, नेता–कार्यकतालाई मात्र नभएर सिंगो देशलाई नै असर परेको उनले बताए। कुराकानीको क्रममा नेता रावलले भने, ‘पार्टी एकताको प्रक्रिया अविलम्ब चाँडो सकिनुपर्छ।
हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू सचिवालयले टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै भनि रहेको छु। राजनीतिक दस्तावेज वा प्रतिवेदनमा पार्टीका मूल्य र मान्यता संलग्न हुनुपर्छ।’ राजनीतिक प्रतिवेदन बाहिर आउँदा नेता तथा कार्यकर्ताको भावना समेटिने हुनु पर्ने भन्दै उनले एकता प्रक्रिया ढिलो हुँदा पार्टी मात्र नभई देशलाई नै क्षति पुगेको बताए।
‘पार्टी एकताको कामलाई अझै ढिलो गर्नु भनेको झनै क्षति बढाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई,’ पार्टी एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षद्वय र सचिवालयले गरेको भन्दै उनले भने, ‘म सहज कुरा गर्दिनँ। एकताको सबै जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयले लिनु भएको हो र उहाँहरू पछि सचिवालयले लिएको हो। स्थायी समितले एकपटक कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदल सचिवालयले भंग गरिदियो।’ जिम्मेवारीको हिसाबमा नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
‘भूमरी’मा शीर्ष नेता
एकता प्रक्रिया ढिलो भएसँगै पार्टीका शीर्ष नेताहरू आफैं समस्यामा पर्न थालेका छन्। पार्टी एकता घोषणासभामै तीन महिनाभित्र पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामहरू सक्ने उद्घोष गरेका नेताहरूलाई पछिल्लो समय उत्तर के दिने ? भनेर समस्या पर्न थालेको छ। पार्टी एकताको विषयमा आउने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन यति बेला शीर्ष नेताहरू असक्षम देखिएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिन छाडेका छन्। नेकपा स्रोतका अनुसार सचिवालयमा देखिएको चरम विवाद र असन्तुष्टिले नेताहरू ‘भूमरी’मा पर्न थालेका छन्।
ओली र दाहालबीच गुटको अवस्था सिर्जना भएसँगै सचिवालयका सदस्यहरू विभाजित भएका छन्। नवगठित नेकपाको सचिवालयमा भएका नौ सदस्यमा नयाँ समीकरण बनेसँगै कार्य विभाजनमा ढिलाइ भएको हो। सचिवालय समूहमा नै एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल छन् भने अर्का तिर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्।
दाङमा विप्लव दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पक्राउ
परीक्षार्थीहरुले त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा बहिस्कार गरे
राजनीतिकज्ञले प्रविधिको प्रयोग नगरे परिवर्तन असम्भव छ: मन्त्री नरेश भण्डारी
विवेकहीन नेतृत्वको पछि लाग्नु आफैलाई अन्धकारमा उभ्याउनु हो :डण्डि प्रशाद शर्मा